We She Me: Natural Key
database နဲ့ software development လုပ်ရာမှာ primary key၊ foreign key နဲ့ candidate key တို့ကို အများက ရင်းနီးပြီး ဖြစ်မယ်။ အခု ပြောချင်တာကတော့ natural key နဲ့ surrogate key အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ သိပြီးသား ဖြစ်ပေမယ့် သက်ဆိုင်နေလို့ ပြန်ပြောချင်တာကတော့ primary key ရဲ့ characteristic တွေပါ။ primary key ဟာ
- record တစ်ခုစီ အတွက် unique ဖြစ်ရမယ်
- null value ဖြစ်လို့ မရဘူး
- immutable ဖြစ်ရမယ် (ပြောင်းလို့ မရနိုင်ရဘူး။ record တစ်ခု အတွက် key ပေးပြီး သွားရင် ပြန်မပြောင်းရဘူး။)
တခြား လိုက်နာသင့်တာတွေက တော့
- numeric value ဖြစ်ရမယ်
attribute တတ်နိုင်သမျှ နည်းရမည်။ (column တစ်ခု ထက်ပိုပြီး composite key လုပ်ခြင်းကို တတ်နိုင် သမျှ ရှောင်ရှားရမည်)
- recycle မလုပ်ရဘူး။ (ဖျက်လိုက်တဲ့ record ရဲ့ primary key ကို record အသစ်အတွက် ပြန်သုံးခြင်း)
primary key အတွက် သင့်တော်ရာ column တစ်ခု ကို ရွေးချယ်ရာမှာ natural key ကနေ စပြီး စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ book ဆိုတဲ့ table မှာ ISBN number ဟာ unique လည်း ဖြစ်တယ်။ စာအုပ်တိုင်းမှာလည်း ရှိနိုင်တဲ့ အတွက် primary key ဖြစ်နိုင်တဲ့ အရည် အချင်း ရှိတဲ့ candidate key တစ်ခုပါ။ အဲဒီလို primary key အရည်အချင်းလည်း ရှိပြီး ပြင်ပလောကမှာ နားလည်နိုင်တဲ့ (business meaning ရှိတဲ့) key ကို natural key လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အမေရိကားမှာ ဆိုရင် person ဆိုတဲ့ table မှာ SSN (social security number) ဆိုတဲ့ column ဟာ primary key အဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ ဆိုရင်တော့ IC No (identification card no) လိုမျိုးပါ။ သြော်ဇီမှာဆိုရင် employee ဆိုတဲ့ table တစ်ခုမှာ TFN (tax file number) column ဟာ primary key ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလို natural key မရှိတဲ့ data တွေ အတွက်သော် လည်းကောင်း၊ ရှိသော်လည်း natural key ကို မသုံးချင်ရင်သော် လည်းကောင်း key တစ်ခုကို generate လုပ်ပြီး သုံးပါတယ်။ synthetic identifiers တွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို မိမိ ဘာသာ generate လုပ်တဲ့ ၊ ဒါမှမဟုတ် database က generate လုပ်ပေးတဲ့ key ကို surrogate key လို့ ခေါ်ပါတယ်။ မိမိဘာသာ လုပ်မယ်ဆို ဥပမာ max(id) + 1 ဆိုပြီး လုပ်နိုင်ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှ ထည့်ထားတဲ့ record ကို ဖျက်ပြီး key generate လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ key အဟောင်းကြီးကို record အသစ်အတွက် ပြန်သုံးမိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ table မှာ unique ဖြစ်ပေမယ့် ဒီလို တစ်ခါသုံးပြီးသား key ကို ပြန်မသုံး သင့်ပါဘူး။ surrogate key သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း database က support လုပ်တဲ့ key ကို သုံးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ MS SQL မှာ identity၊ Oracle မှာဆိုရင် sequence နဲ့ postgreSQL မှာ serial လိုမျိုးပါ။ ဒီထက် ပိုမိုပြီး ရှုပ်ထွေးပေမယ့် unique ပိုဖြစ်အောင် UUID တို့ GUID တို့ သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလို key တွေကတော့ မိမိ system မှာသာ မက တကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ system တွေမှာပါ unique ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ surrogate key တွေဟာ system generated key လည်း ဖြစ်တဲ့ အပြင် business meaning လည်း မရှိတဲ့ အတွက် အဲဒီ တန်ဖိုးတွေကို end users တွေကို မပြသင့်ပါဘူး။ end user ကို ပြတာ ပေးသုံးတာကို naturalise လုပ်တယ် ခေါ်ပြီး အဲဒီလို လုပ်လိုက်ရင် surrogate key ရဲ့ဂုဏ်ကို ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ system ကို debug/trace လုပ်ဖို့ logging လုပ်ဖို့ mechanism/feature တစ်ခု ရှိထားရင် အဲဒီမှာတော့ ပြနိုင်ပါတယ်။
natural key တွေဟာ business meaning ရှိတယ် ဆိုပေမယ့် အဲဒီ key ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ record တစ်ခုလုံးရဲ့ information ကို မသိနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ ISBN နံပါတ် သိရုံနဲ့ အဲဒီ စာအုပ်အကြောင်းကို ချက်ချင်း မသိနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအခါ key ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ ဒါဘာလဲဆိုတာ အနည်းနဲ့ အများ ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ smart key တွေ သုံးချင်လာပါတယ်။ ဥပမာ employee table မှာ empid ကို ရှေ့က စာလုံး နှစ်လုံးကို department ရဲ့ အတိုကောက်တွေ ထည့်တာပါ။ IT001, IT002, AC003 လိုမျိုးတွေပါ။ US zip code တွေကို ကြည့်လိုက်ရင်လည်း ပထမ နှစ်လုံးက ဘယ် ပြည်နယ်ကလည်းလို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို smart key တွေကို လုံးဝ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီလို smart key တွေကို generate လုပ်ရတာ ကြာလာရင် ပြောင်းဖို့ လိုလာတတ်လို့ပါ။
များသောအားဖြင့်တော့ surrogate key ကိုပဲ primary key အဖြစ် သုံးကြပါတယ်။ natural key တွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် primary key အဖြစ် မသုံးရပါဘူး။ ဒါ့အပြင် natural key တွေဟာ numeric မဟုတ်ဘဲ text တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ text value ရှိတဲ့ column ကို primary key အဖြစ် သုံးရင် database system ကို နှေးစေနိုင်ပါတယ်။ (UUID တို့ GUID တို့ကတော့ ရုတ်တရက် ကြည့်လိုက်ရင် alpha numeric ဖြစ်ပေမယ့် အတွင်းမှာတော့ hexa value နဲ့ သိမ်းလို့ တော်ရုံတန်ရုံတော့ မနှေးစေပါဘူး။) နောက်ပြီး natural key တွေဟာ business rule တွေနဲ့ coupled ဖြစ်နေပါတယ်။ ဥပမာ customer no ကို အရင်က numeric ပဲသုံးနေရာကနေ alpha numeric ပြောင်းချင်ရင် အခက်တွေ့ပါမယ်။
natural key ကိုပဲ primary key အဖြစ် သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ table မှာ surrogate key အတွက် column တစ်ခု အပို ထည့်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ end user ကလည်း နားလည်နိုင်ပါတယ်။ surrogate key တွေကို primary key အဖြစ် သုံးသင့်တယ် ဆိုပေမယ့် natural key တွေကိုလည်း alternate key အဖြစ် table မှာ ရှိနိုင်ရင် ရှိသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် search လုပ်ဖို့ပါ။ ဥပမာ စာအုပ်ကို ရှာဖို့ရာ ISBN နဲ့ ရှာသလို မျိုးပါ။ နောက်ထပ် ကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ မတူတဲ့ system တွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်သွယ်ပြီး အချက်အလက် ဖလှယ်ဖို့ (data interchange လုပ်ဖို့) ပါ။ natural key တွေဟာ standard key တွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ISBN နံပါတ်ကို စနစ်တိုင်းက နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့က တစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက် standard ဖြစ်ပေမယ့် တချို့ကတော့ တစ်နိုင်ငံစာပဲ standard ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ zip code လိုမျိုးပါ။
စနစ်တိုင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ အကန့်အသတ်တွေက မတူညီနိုင်တဲ့ အတွက် ဘယ်ဟာကို သုံးမှ မှန်မယ်ဆိုတာကတော့ မရှိပါဘူး။ အကန့်အသတ်တွေ အတွင်းကနေ နောက်ပိုင်းအတွက်လည်း စိတ်ချရမယ့် (scalable ဖြစ်မယ့်) နည်းလမ်းကို သုံးတာတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
KNAT - 5/20/08, 7:04 PM
Hello Ko Anday
Its really useful to read about ur working experiences and IT knowledge. But I also love to read about ur other posts. Pls contribute more about IT. I will be looking forward to read. Many Thanks
Andy Myint - 5/21/08, 9:57 PM
I will try to write more, KNAT.
Anonymous - 5/21/08, 10:05 PM
It isagood one & common for all IT audience. Thanksalot for sharing.
TZA - 5/23/08, 12:26 PM
ဒီလိုနက်နဲတဲ့ပို့စ်မျိုးမှာ ကော်မန့်မရေးရင် နားမလည်ဘူးအထင်ခံရမှာစိုးလို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ကော်မန့်ရေးသွားတယ်၊ ဟိဟိ။